Iibsiga warbaahinta khadka tooska ah kama duwana iibsashada joodariga. Qofka macaamilka ahi wuxuu ku arki karaa furaash hal dukaan oo ay rabaan inay iibsadaan, isagoo aan ogeyn in dukaan kale, isla gabalku uu yahay qiimo hoose maxaa yeelay wuxuu ku hoos jiraa magac ka duwan. Muuqaalkani wuxuu ku adkeynayaa iibsadaha inuu si sax ah u ogaado waxa ay helayaan; waxaa la mid ah xayeysiinta internetka, halkaasoo cutubyo laga iibsado oo la iibiyo oo dib loo xirxiro
Haddii aad waligaa ka shaqeysay goobta macmiilka oo aad ku dartay lambarka beddelashada ee Adwords qaab shaybaar ah laakiin kaliya markii shaxankaas lagu soo bandhigay shuruudo gaar ah, waad ogtahay madax-xanuunnada bogagga calaamadeynta! Taagaggu waa xoogaa yar oo koodhka websaydhka ah oo kaa caawin kara bixinta fikrado waxtar leh, laakiin sidoo kale waxay sababi karaan caqabado. Tilmaamo badan ayaa ka dhigi kara boggaga gaabis iyo jahwareer; tags si khaldan loo adeegsaday ayaa qalloocin kara cabirkaaga; waana noqon kartaa
Kaarka Ganacsiga ee Wordle!
Khamiis, Juun 31, 2008 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Wordle waxay garaacday barta internetka dhowr toddobaad ka hor, dadka wax qoraana way mashquulsanaayeen! Wordle waa codsi Java ah oo u beddelaya daruurahaaga tag waxyaabo qurux badan. Waxaan u maleynayay in Wordle uu ahaa mid qabow, laakiin daruuri maahan in wax lagu qoro. Maanta waxaan la tashaday Sharpminds. Mid ka mid ah dadka kulanka ku jira, Linda Watts, ayaa dhiibtay kaarkiisa isla markiiba wejigeyga ayuu dhoola caddeeyay! Linda waxay lahayd aruurin dhan oo iyaga ka mid ah (iyo sidoo kale qaar